Filohan’ny fitsarana ambony : “Tsy azo ekena intsony ny fitsaram-bahoaka eto Toamasina” -
AccueilRaharaham-pirenenaFilohan’ny fitsarana ambony : “Tsy azo ekena intsony ny fitsaram-bahoaka eto Toamasina”
25/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vita omaly zoma ny lanonam-pitsarana nametrahana ny filoha voalohany ny fitsarana ambony vaovao eto Toamasina, ingahy Andriamboavonjy Faustant Emmanuel, araka ny didim-panjakana laharana 2017-721 ny 24 aogositra 2017; izay nisolo an’ingahy Ramananjatovy Harison Henry, izay filoha voalohany ny fitsarana ambony teo aloha, nivoaka nisotro ronono ny volana jona lasa teo tamin’ny maha-mpitsara grady voalohany azy, raha 14 taona niasana teto Toamasina.
“Tsy azo ekena intsony ny fitsaram-bahoaka eto Toamasina, satria mazava ny lalàna mikasika ny resaka vonoan’olona. Satria masina ny fitsarana ka mila mametraka izany maha-masina ny fitsarana izany ny mpitsara”, hoy ingahy Andriambohavonjy Faustant Emmanuel, izay isan’ny tanjona apetrany amin’ny maha-lehiben’ny mpitsara mpamoaka didy sy mpanao fanadihadiana azy eo anivon’ny fitsarana ambony. Nohamafisiny hatrany fa “tsy ny olona no tsy tia mpitsara, na tsy mahatoky ny fitsarana, fa olan’ny mpanao politika sy ireo mpandinika politika izany.
Ny tena zava-misy dia ny fahantrana sy ny fahatezeram-bahoaka amin’ny ara-politika no mahatonga izao olana izao”.
Ho an’ny minisitry ny Fitsarana kosa, Rtoa Rasolo Elise Alexandrine dia nohazavainy fa efa nisy fepetra manokana noraisin’ny governemanta nandritra ny filan-kevitry ny minisitra, izay hisian’ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ary ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena izay misy ny sekreteram-panjakana misahana ny zandarimariam-pirenena, amin’ny hetsika fametrahana filaminam-bahoaka ifotony sy ny fanentanana ny olona momba ny tsy maha-ara-dalàna ny fitsaram-bahoaka, ary famerenana ifotony ny fatokisan’ny vahoaka malagasy ny fitsarana, sy ny mpitandro filaminana noho ny zava-misy eto.
Ankoatra izay dia isan’ny olana matetika ny resaka fampidirana am-ponja ireo voarohirohy alohan’ny fitsarana; nomarihin’ny tonia mpampanoa lalàna ambony eto Toamasina, ingahy Andriamihangy Georges Florence, fa tsy voatery miditra amin’izany ny mpitsara arakaraka ny zava-misy momba ireo voarohirohy; eo koa ny fitsinjovana ny fahateren’ny fonja eto amintsika raha tsy hilaza ny ao Moramanga, izay tsy mahazaka olona afa-tsy 80 nefa mampiantrano voafonja 476 izao; ny eto Toamasina renivohitra raha tokony ho 300 monja nefa efa 1 000 mahery izy ireo izao.